Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee qiyaasta da’da oo la diyaariyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mashiinka raajada ee lagu baaro da'da shakhsigu uu jiro. sawir: Johan Nilsson/TT
Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee qiyaasta da’da oo la diyaariyay
La cusbooneeyay tisdag 30 maj 2017 kl 10.34
La daabacay tisdag 30 maj 2017 kl 09.01
Wakaaladda xeerka caafimaadka - Rättsmedicinalverket oo diyaarisay qaybtii ugu horreeysay ee qiimeeynta da’da. Guud ahaan 581 kiis ayay natiijadii ka soo baxday noqotay iney 442 ruux ee laga qaaday ay da’doodu ka sarreeyso 18 iyo wax ka badan.
Wakaaladda Rättsmedicinalverket ayaa illaa hadda gacanta ku haysa qiyaastii 4 200 kiis ee la dooneyo in lagu sameeyo baaris dhanka da’da la xiriirta, middaasina oo ka soo gaartay wakaaladda socdaalka ee Migrationsverket. Iyada oo iminka 581-kii ugu horreeyay howshoodii la dhameeyey, sida ay qoraal saxaafadeed ku daabacday wakaaladda xeerka caafimaadka Rättsmedicinalverket.
Hoowlaha tijaabada da’da ayay ka dambeeysaa kolka ay wakaaladda socdaalku go’aamiso in aanay caddeeyn da’da dhallaanka keli-nimada dalka ku yimaada. Baarista da’da ayaan lagu ogaanayn da’da dhabta ah ee shakhsiga la hadal hayo inuu/inay 18 ka wayn tahay ama ka yar tahay.
442-ka kiis oo iminka diyaarka ah ayaa dadyoowga da’dooda la tijaabiyey ey ka wayn yihiin 18 ama ka badan. 12 ka mid ah waa haween halka ey 430 yihiin rag.
Shan ka mid ah ayaa loo maleeynayaa inay da’doodu ka wayn tahay 18 ama ka badan (waa haween oo keliya).
Halka ey 124 kiis oo baaris lagu sameeyey da’dooda la sheegay iney ka yar tahay 18. Mid ka mid ah waa dheddig, halka 123-ka kale yihiin rag.